Socdaalayaashu waxay doorbidaan inay ballansadaan ciidaha si toos ah bixiyeyaasha iyada oo aan la hubin
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka UK » Socdaalayaashu waxay doorbidaan inay ballansadaan ciidaha si toos ah bixiyeyaasha iyada oo aan la hubin
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • kirada baabuurka • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • News • jiga • Waajib ah • Technology • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Gaadiidka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka UK • Wararka kala duwan
Jidadka tooska ah ee ballansashada waxay u badan tahay inay la kulmeen koror caan ah sababo la xiriira jilicsanaanta ballansashada safarka xaaladda hadda jirta.
Doorbidka macaamilku wuxuu si toos ah ugu wareegayaa ballansashada ciidaha
39% jawaabeyaasha sahanka ayaa sheegay inay si caadi ah u ballansadaan safarka si toos ah
17% jawaabeyaasha sahanka ayaa sheegay inay doorbidayaan OTAs iyo goobaha isbarbardhiga qiimaha
Ra'yi ururin dhowaan laga sameeyay warshadaha safarka ayaa muujisay isbeddel ku yimid doorbidista macaamiisha ee ku aaddan ballansashada ciidaha si toos ah, halkii laga mari lahaa hay'adda socdaalka ee internetka (OTA).
Wadarta 39% jawaabeyaasha ayaa sheegay inay si toos ah u xajisan doonaan, oo ay ku xigto 17% oo doortay OTAs iyo goobaha isbarbardhiga qiimaha.
Falanqeeyayaashu waxay xusayaan in isbedelkani uusan ahayn wax lala yaabo, marka loo eego baajinta dabacsan iyo siyaasadaha soo celinta tooska ah ee lagu bixiyo ballansashada tooska ah.
Faafida waxay ku keentay isbadal weyn caadooyinka macaamiisha macaamiisha. Daraasad hore oo ka dhacday Q3 2019 waxay muujisay in OTAs ay yihiin xulashada ballansashada ugu caansan, oo ay ku xigto ballansi toos ah hudheel ama diyaarad. Si kastaba ha noqotee, qaar ka mid ah OTAs ayaa si aad ah uga gaabiyay soo saarista lacag celinta waxayna heleen raafad saxaafadeed xun natiijada. Tani waxay jabisay kalsoonidii dadka safarka ah si ay ugu xareeyaan dhex dhexaadiyayaal.
Jidadka tooska ah ee ballansashada waxay u badan tahay inay la kulmeen koror caan ah sababo la xiriira jilicsanaanta ballansashada safarka xaaladda hadda jirta. Socdaalayaashu hadda waxay rabaan heerka ugu sarreeya ee dabacsanaanta, mana aha wax la yaab leh in tooska loo dalbado kanaallada 'shuruudaha rogrogmi kara, isbeddelada fudud iyo soo celinta degdegga ah ay ku guuleystaan ​​safrayaasha.
Dheeraad ah, awood u lahaanshaha isbedelka khadka tooska ah waxay awooda dib ugu celisaa gacmaha musaafirka waxayna toosineysaa nidaamka oo dhan. Adoo si toos ah u ballansanaya, socotada ayaa jareysa dhex-dhexaadiyaha, si xawli leh u dedejineysa howlaha isbeddelka / soo-celinta, waxayna kordhineysaa qanacsanaantooda.
Qaar ka mid ah OTAs way ka gaabiyeen inay soo celiyaan lacag celin, iyo saxaafadda taban ee la helay ayaan ka caawin caawinta kalsoonida socotada. Xaqiiqdii, xaaladaha qaarkood, UK Hay'adda Tartanka iyo Suuqyada waxay ku hanjabtay in tallaabo sharci ah laga qaadi doono haddii aysan wakaaladaha socdaalka ee internetka kula kulmin jadwalka soo celinta 14-maalmood.
Ku kalsoonaanta awoodda OTAs ee soo-celinta lacag-celinta ayaa si dhakhso leh u lumisay kalsoonida. Jawaabaha tartiib-tartiibka ah waxay ahaayeen kuwo si aad ah u jahwareersan waxayna keeneen in yar oo laga weecdo habkan ballansashada ah.